Iindaba - Amanyathelo okhuseleko kubantwana abanxibe imaski ye-PM2.5
Amanyathelo okhuseleko kubantwana abanxibe imaski ye-PM2.5
Iimaski ze-PM2.5 zabantwana nazo ziya kuba nefuthe elithile. Iimveliso ezilungileyo zinokuthintela uninzi lomoya ongcolileyo. Iziphumo zazo ziya kuchaphazeleka kwezinye izinto ezifanelekileyo, ezinje ngohlobo lokungcola komoya, nokuba ingaba ubukhulu beemaski bufanelekile kusini na, ezinje ngendlela yokunxiba iimaski zokulwa inkungu.
Okokuqala, kufuneka sinikele ingqalelo kwiimveliso zabantwana. Ngenxa yezizathu zokhuseleko, abantwana abaneminyaka emi-0 ukuya kwezi-2 ubudala abanconyelwa. Kwiintsana ezineminyaka eyi-0-2, nokuba zinxiba iimveliso zabantwana, kusekho umngcipheko wokufuthaniseka, ke zama ukungazisebenzisi. Kubalulekile ukubuyisela imaski engcolileyo endaweni yokuyicoca; ukuba imaski ye-PM2.5 iza kuphinda isetyenziswe, kufuneka igcinwe kwisingxobo sephepha esicocekileyo ukuze sisetyenziswe kwakhona. Emva kokunxiba okanye ukususa imaski ye-PM2.5, hlamba izandla kakuhle ukuqinisekisa ucoceko. Emva kokuyisebenzisa, nceda uyipakishe ngaphambi kokuyilahla kumgqomo wenkunkuma. Iimaski ze-PM2.5 ziyimveliso yococeko lomntu kwaye akunakwabelwana ngazo. Ukuba ucinga ukuba iimaski azikho mpuluswa njengangaphambili, kuya kufuneka ubeke ezinye endaweni yazo.
PM2.5 isixhobo sokuphefumla
Okwesibini, iimaski ze-PM2.5 ezisetyenziswa ngabantu abadala azilungelanga abantwana. Iimaski zabantwana akukho lula ukuzithenga, ezibe yimvumelwano neBaoma. Uninzi lwabazali kufuneka bavumele abantwana babo banxibe okanye banganxibi iimaski zabantu abadala konke konke kuba abanakufumana efanelekileyo. Abantwana banxiba iimaski zobuchule zokukhusela, kodwa iimaski zabantwana ezithandwayo ze-PM2.5 zinefuthe elibi. Enye yezona ngxaki ziphambili kukuxinana, okuhlala kwenza ukuba abantwana bazive kunzima ukuphefumla. Ukongeza, iimaski zokulwa inkungu yabantwana zinokuhlangabezana nezinye iingxaki xa zisetyenziswa. Umzekelo, abantwana batsala iimaski ze-PM2.5 ngenxa yokungaphefumli kakuhle okanye ukungonwabi, okanye abanako ukunyanzelisa ukunxiba iimaski zokuzikhusela ngenxa yelinge labo. Ukusebenza kokukhuseleka kuxhomekeke kubuchule babasebenzisi bokunyanzela ukuba banxibe kwimeko-bume engcolileyo. Kwimeko yeemeko zomoya ombi, abantwana kufuneka banciphise imisebenzi yabo yangaphandle, bahlale ezindlwini kangangoko kunokwenzeka, kwaye bacinge ngokuthatha umoya ococekileyo
Ngaphambili: Ngaba imaski yakho yobuso inxitywe ngokuchanekileyo?